Sida looga soo degsado barnaamijyada App Store-ka iPhone X | Wararka IPhone
Imaatinka macruufka 11 iyo iPhone X waxay la macno tahay isbadal weyn oo ku yimid bilicsanaanta iyo howlaha App Store. Dukaanka Apple iOS App Store ayaa lagu sameeyay dib u habeyn ku dhow dhameystirkeeda halkaasoo sheekooyinka horumariyaha iyo talooyinka abku ay hadda yihiin kuwa ugu muhiimsan. Laakiin leh iPhone X sidoo kale sidaan u soo degsano codsiyada way isbadashay.
Maqnaanshaha badhanka guriga iyo dareemahiisa taabashada ah ee Aqoonsiga Taabashada ah macnaheedu waa in hadda si aan isku aqoonsanno aan u isticmaalno aqoonsiga wajiga ee iPhone X. Waxa loogu yeero Face ID ee had iyo jeer firfircoon waa masuul ka ah aqoonsiga wajigeena oo markaa u sii soco iibsiga arjiga aan codsanay inaan soo dejino. Laakiin sidee baan ku xaqiijin karnaa iibsiga si looga fogaado soo degsasho aan loo baahnayn?
Illaa iyo hadda, illaa iyo intii uu taleefankayagu iPhone haystay Taabasho Taabasho, markii aan soo degsannay codsi markii ugu horreysay waa inaan xaqiijinnaa aqoonsigeenna iyo ujeedkeenna inaan sidaas yeelno annagoo farta saareyno dareeraha faraha ee ku dhexjira wax ka hooseeya badhanka guriga. Sidan oo kale, IPhone wuxuu ogaa inay annaga tahay oo wuxuu sii waday inuu wax iibsado oo soo dejiyo isagoo aan gelin lambarkaaga sirta ah. Laakiin leh iPhone X maya badhanka guriga, sidaas aqoonsiga wajiga ayaa ah kan u xilsaaran aqoonsiga, wax si otomaatig ah u dhaca kaliya adoo fiirinaya shaashadda, taas oo ah mid caadi ah markaan soo degsanayno codsi.
Sidee looga fogaadaa keystrokes qalad ah oo sababa soo degsashada tooska ah ee arjiga? Apple waxay ku dartay talaabo ilaa iyo hada aysan ka jirin qalab kasta: riix badhanka dhinaca laba jeer. Tilmaamkan fudud wuxuu u oggolaanayaa nidaamka inuu ogaado inaan dhab ahaantii dooneyno inaan iibsanno codsi iyo in uusan khalad ahayn, oo soo dejintu si toos ah ayuu u bilaaban doonaa. Apple waxay dooran lahayd badhan muuqaal ah oo shaashadda ah, laakiin waxay doorbidday inay ahayd badhan muuqaal ah oo sameeya iibka. Isla sidaas ayaa la mid ah iibsashada gudaha-abka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo soo dejisto barnaamijyada iPhone X
Fuck Luis maaha mid doonaya inuu wax dhaleeceeyo, laakiin qoraaladaadu marwalba way raacaan heerkan, soo rar maxaa yeelay way u fiicnaan doontaa qof walba.
Haddii aad u sameyso si aad u buuxiso dhamaadka waxaan joojin doonaa booqashada webka
Dhammaan akhristayaashu nasiib uma yeeshaan inay yeeshaan aqoon horumarsan, sida waxaad moodaa inaad haysato. Maqaalkani wuxuu ka jawaabayaa xaqiiqda ah in mid ka mid ah raadinta ugu caansan ee google uu si sax ah u yahay sida loo soo dejisto barnaamijyada ku saabsan iPhone X. Waa inaan u qoro qoraalo qof walba, way u fududdahay sida aan loo aqrin kuwa aan adiga dan kuu ahayn.
Maaha inaad wax dhaleecayso, laakiin haddii fikradahaaga oo dhami ay had iyo jeer raacaan heerkan, soo rar maxaa yeelay way u fiicnaan doontaa qof walba. Sababtoo ah shalay oo ku saabsan Tlegram X sidoo kale waxay ahayd xusuus, marka lagu daro muujinta aqoonta aan waxba ka jirin ee ku saabsan barnaamijka.
Haddii aadan jeclayn baloogga, waxaa lagugu martiqaadayaa inaadan mar dambe soo galin, waa lacag la'aan.
Goorma casharka si aad ugu soo celiso mugga iPhone X?
Taasi waa waxa aanan sameyn doonin markale, waad ku mahadsantahay martiqaadkaaga
OMG, qayb ka mid ah casharrada hahahahahahaha
Iyagu waa fasal xun oo dhaleeceynaya waqtiga macluumaadka oo dhan oo loogu talagalay dadka aan garanayn inay wax u tari karto iyo in kale, waxaa jira noocyo dad ah oo wax dhaleeceeya sababta oo ah maxaa diidaya, haddii aysan xiiseyneynin, si fudud uma akhriyaan
Hagaag, qodobku wax badan buu i caawiyey. Waxaan ku sigtay inaan waco tufaax si aan u cadeeyo sida wax loo iibsado. Waan sii booqanayaa degelkaaga cajiibka ah. Mahadsanid
Jawaab Aldof Gall
Aniga ahaan sidoo kale waa maqaal aan horey u ogaa sida loo sameeyo, uma aanan baahnin, laakiin waxaan fahansanahay in qaar badan oo ka mid ah haddii ay shaqeyso, mararka qaarkood aysan kuu shaqeyn doonin adiga iyo waqtiyada kale, sidoo kale waxaan fahansanahay in qorista maqaallada aysan aheyn sida ugu fudud ee waxwalba oo aad u leedahay in aad Dhigto waa war farxad weyn u ah qof walba dhinaca kale waxaa jira kuwa waxoogaa dhaawac ah ku qabaan Apple, hubaal waxbaa ku dhacay iyaga markii ay yaraayeen waxayna u tegayaan tusaale ahaan madasha iphone si ay u dhaleeceeyaan , ka dib way fuulaan oo ka cawdaan maxaa yeelay si qalad ah ayaa looga jawaabey, ma aadi doono mid ka mid ah Samsung si aan ugu lug yeesho taleefanka gacanta ama astaamaha, intaas ka sokow waa mobiil weyn, qof walbana wuxuu leeyahay dhadhankiisa taasna waa wax weyn in waa sidaas oo kale, laakiin kuwa aan ula jeedo waa kuwa leh mobilada nooca loo yaqaan 'adafsadfa brand' waxayna sugayaan wax ka soo baxa Apple si ay u dhalleeceeyaan, aniga aniga waxay qabaan xoogaa dhaawac ah oo soo gaadhay tan iyo yaraantiisii ​​oo taas ku hoggaamisa, waxaan u maleynayaa waa inaan lagu xisaabtamin iyo in ka badan waqtigan, ma jiro waqti xun meelna, haddii la arko cinwaanka sida loo rakibo already .. horeybawaad ogtahay maxaa yeelay waad tagtaa oo waxaad aadaa maqaallo kale. Salaan kadib waxaana laga yaabaa in sanadka soo socda uu noqdo midka ugu fiican qof walba.